Wiil Soomalida degen Minnesota ooka dhinac dagaalamayey Jabhada ISIS - Wargeyska Faafiye
Wiil Soomaali Maraykan ah ayaa lagu soo warramayaa inuu yahay qofkii labaad ee Maraykan ah ee lagu dilay Syria isagoo ka bar bar dagaalamaya kooxda ISIS.
magaalada Minneapolis ayuu degenaa wiilkaas magaciisana waxaa la oran jiray Cabdiraxman Muxumed.
anagoo soo xiganaya ilo wareedyo shacabka soomaalida ah ee degen Minnesota ayaa sheegaya in Cabdiraxmaan lagu dilay isla goobtii uu ku dhintay Douglas McCain, oo ahaa 33-jir Maraykan ah oo isna ka tagay agagaarka Minneapolis kuna biiray kooxda ISIS.
Wararka dhimasha wiilkaas Soomaali Maraykanka ah ayaa lagu baahiyay baraha bulsha, saraakiisha amniga Maraykankuna waxay sheegayaan inay wararkaasi arkeen, balse aanayn xaqiijin karin wali inuu run yahay iyo in kale.
Dhinaca kale, hooyada dhashay wariye Maraykan ah oo ay haystaan kooxda ISIS ayaa ka codsatay hoggaamiyayaasha kooxda in wiilkeeda Steven ay u sii daayaan
Hooyadan oo lagu magacaabo Shirley Sotloff ayaa muuqaal Video ah ku sheegtay inuu wiilkeedu yahay “nin sharaf leh” oo aa loo ciqaabi karin ficilada dowladda Maraykanka.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsMo Farah becomes father to twin girls.Heshiiskii Somalia & Somaliland.Isgaarsiinta qaar ka tirsan deegaanada J/hoose oo maqan xilli howl gallo ay socdaanSawirro: Qaabkii loo fuliyay toogashadii Xasan Xanafi.‘Captain Phillips’ trailer: Somali actor Barkhad Abdi sparks supporting Oscar buzz.